IPhone XR ee soo socda ayaa qaadi doona batariyaal leh 6% awood dheeri ah | Wararka IPhone
Elec ayaa mas'uul ka ahaa bilaabista xantaan ku saabsan qaabka soo socda ee iPhone XR ee imaan doona bisha Sebtember iyada oo ay weheliyaan inta kale ee Apple ee iPhone. Xaaladdan oo kale waa xan ku saabsan qaabka ugu jaban Apple ee kaas oo lagu sharxay in shirkadda bedeshay cabirka baatariga wuxuuna noqon doonaa qiyaastii 6% ka weyn.
Midabada cusub ee moodeelkan iPhone-ka ah ka sokow, warka ayaa ka digaya taas kuwan iPhone XR waxay lahaan doonaan batari 3110 Mah, qiyaastii boqolkiiba 5,7 ka badan ka badan qaabka hadda jira. Xaqiiqdii wali way ka yara yaraan doontaa waxa iPhone XS Max leeyahay, laakiin taasi waa koror fiican haddii ay run tahay.
Xaqiiqdii, baytariyada moodooyinka cusub ee iPhone-ka ayaa la filayaa inay xoogaa ka weynaadaan marka la eego awoodooda sidaa darteedna aysan ahayn wax la yaab leh in warkan la baahiyo. Apple wax badan ayey ka shaqeyneysay waana in ismaamulka iPhone-ka hada jira uu yara fiican yahay, laakiin dadka isticmaala marwalba wax badan ayey rabaan. Tani waxay hagaajin kartaa waayo-aragnimada isticmaale wax badan waana waxa soo saarayaasha badankood ay maanta ku shaqeynayaan, kor loo qaado awoodda baytariyada si ay u bixiso ismaamul ballaaran.
Sida ku xusan warbixintan sirta ah ee ay qortay The Elec, shirkadda gacanta ku haysa fulinta shaqadan waa ATL China (Ameperx Technology Limited) sidaa darteed soosaarka ballaaran ee baytariyadaan ayaa durba run noqon kara iyo iPhone XR wuxuu noqon lahaa aqbalaha isla. Waxaa la rumeysan yahay in baytariyadan ay bilaabi doonaan inay ku soo ururiyaan aaladaha ugu horeeya shirkad kale oo dalka ka dhisan dhawaan, runti waxay noqon laheyd shaqo ay fuliso shirkad kale, Huapu Technology. Waxaan rajeyneynaa inaan aragno warar dheeri ah oo la mid ah maalmaha soo socda illaa bisha Sebtember ay soo galeyso moodooyinka cusub ee iPhone-ka ahna la soo bandhigayo
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone Xr » IPhone XR ee soo socda ayaa qaadi doona batariyaal leh 6% awood dheeri ah
TomTom wuxuu dib u cusbooneysiiyaa barnaamijka hagista leh khariidadaha qad la'aanta ee CarPlay